Soomaaliya oo laga xusay maalinta Boostada Adduunka | Somsoon
Home WARAR Soomaaliya oo laga xusay maalinta Boostada Adduunka
Soomaaliya ayaa maanta boostada caalamka la xusaya Maalinta Boostada Adduunka, iyada oo sanadkan ay ku soo aadeyso xilli Boostada Soomaaliya ay u buuxsantay muddo 60 sano ah markii aan xubinta ka noqonay Ururkaas.
Isaga oo ka hadlayay xuska munaasabaddan, ayaa wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, Md. Eng. Cabdi Cashuur Xasan, waxa uu sheegay in ay heer gabagabo ah marayaan dadaallada dib loogu billaabayo dirista boostada dalka, taas oo dhammaystiri doonta dib-u-howlgelinta boostadii dalka.
Wasiir Cashuur ayaa intaasi ku daray in Wasaaraddu ay ka shaqeyneyso sidii loo soo celin lahaa adeegyadii iyo sharaftii ay lahayd boostada dalka, isla markaana u noqon lahayd goob loogu soo hagaago adeegyada boostada casriga ah iyo kuwa dawladda ee ay muwaadiniintu u baahan yihiin.
Wasiirka ayaa qiray inkastoo ay sii kordheyso adeegsiga teknolojiyada adduunka oo dhan, haddana in weli aan laga maarmin kaalinta boostada maadaama ay yihiin adeegyo dhamaystiraya hawlaha ay Boostadu u hayso dadweynaha.
Maalinta Boostada Adduunka waxaa looga dhawaaqay Shirweynihii Midowga Boostada Adduunka ee lagu qabtay magaalada Tokyo ee dalka Japan sanadkii 1969-kii . Ujeeddada laga leeyahay xuska maalintan ayaa ah sidii loo kordhin lahaa wacyi-gelinta dadweynaha ee kaalinta ay boostadu ku leeyahay horumarka dhaqan-dhaqaale ee dal kasta.
Waxaa xusid mudan in Soomaaliya ay ku biirtay Midowga Boostada Adduunka 1dii Abriil 1959-kii, taas oo ah waqti ka horreeyay qaadashadii gobannimada. Hase yeeshee nasiib darroo adeeggaas oo ay ka shaqeyn jireen in ku dhow 3 kun oo qof oo Soomaali ah ayaa la burburay dagaalladii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Article horeDowladda Kenya oo ka jawaabtay dacwaddii ay Soomaaliya u gudbisay QM
Article socoda Dowladda Masar oo ka hortagaysa dibad baxyo kale oo dalkaasi ka dhaca.